Uyangibuka abheke kude ngokushesha | Amadoda aSitayela
U-Alicia tomero | | Izithandani Nezocansi
Kubukeka kunguhlobo loxhumano lapho abantu abaningi bakhombisa intshisekelo ngokubheka emehlweni omunye umuntu. Uma kukhona okukhangayo ngempela, kukhonjiswa yile ndlela yokuziphatha, kungaba nomuntu wobulili obufanayo noma obuhlukile. Umbuzo uthi uma ubona umuntu okuthandayo, bakubheka futhi ngokumangazayo ubheka kude ngokushesha.
Lolu hlobo lwemfihlakalo luziveza lapho ubulokhu ukubheka lokho othile akawasusi amehlo akho kuwe. Lapho-ke lapho uzobuya khona lokho kubheka kulapho ezwa khona ukuthi umzingele nokuyilapho eqala khona ngokushesha. Ngabe kusho okuthile okuhle?
1 Kusho ukuthini uma ungibuka bese ubheka eceleni ngokushesha?
2 Yiziphi ezinye izimpawu ezikhona lapho ekubheka?
Kusho ukuthini uma ungibuka bese ubheka eceleni ngokushesha?
Ngaphandle kokungabaza kuyinto ebaluleke kakhulu futhi ethakazelisa kakhulu. Kungubufakazi obukhombisayo bokuthi a lowo muntu unesithakazelo kuwe, kepha kwesinye isikhathi ingakhombisa omunye umphumela ohlukile. Ekuqaleni kunokuthile ngawe okukhombisa intshisekelo ngomunye umuntu.
Into eheha kakhulu ngalokhu okuhlangenwe nakho akukhona ukuthi ujikisa ikhanda lapho wazi ngobukhona bakhe, kepha ukuthi ubheka eceleni futhi emva kwemizuzwana eyi-15 noma engama-20 uyaphinda akubheke. Ngaphandle kokungabaza luhlobo lokuxhumana okungakhulumi ngamazwi futhi ngaphandle kokungabaza lowo muntu wenza ngokuqaphela noma ngokungazi. Kodwa-ke, landela leyo ntshisekelo enkulu futhi kuzodingeka uthole ukuthi yini engemuva kwalokho.
Uma ucabanga ukuthi lo wesifazane uzama ukunaka wena ngalezi zinhlobo zamasignali, impela selivele lenza kanjalo. Uzokwenza ngalokhu 'kubukeka' okuncane futhi okwamanje angazizwela okuthile ngawe. Uma ubheka eceleni futhi ngokushesha qala kabusha ngesimo sengqondo esifanayo, ngokungangabazeki kuyakucasula.
Lapho umuntu wesifazane enamahloni uzokubheka futhi lapho uqaphela ukubuka kwakhe uzokuphambukisa, kepha ngokushesha uphendulela ikhanda lakhe ngakulo. Uzokwazi ukwenza kuphela uma enesibindi esithe xaxa isenzo esincane sokubonisa intshisekelo yakho.
Kunamacala lapho intombazane ingabheka kude ngezizathu ezahlukahlukene. Mhlawumbe bekungekhona obekulindele, kodwa ungaba novalo noma ungakhululeki. Lapho kunengxoxo esondele futhi ubhekene naloyo muntu futhi ugwema njalo ukubuka kwakho, lezi zizathu zingaba yisiphetho. Kepha ezimweni eziningi labo bantu banikela ngokuthi kukhona abakufihlayo noma ukuthi abathembekile kakhulu emizweni yabo.
Yiziphi ezinye izimpawu ezikhona lapho ekubheka?
Kuyajabulisa impela lapho leyo ntombazane ikuthanda futhi ngasizathu simbe, futhi uyakukhathalela. Ngandlela thile noma okunye ukhombisa ukuthambekela kwakhe lapho ekubuka. Uma ngaphezu kwalokho kubukeka emamatheka nawe, lapho-ke ungalindi ukuphindisela ngokunye ukumomotheka. Ukuthi ubheka kude ngezikhathi ezithile futhi futhi ukumamatheka kuwe kufana nokufuna ukuba nobungane futhi khombisa intshisekelo yokuhlangana nawe.
Uma ngaphezu kokubuka wena, ahleke futhi athinte izinwele zakhe kusobala ukuthi uyakuthanda kakhulu. Kusho ukuthi uyakuthanda, unelukuluku lokwazi, futhi angaba nemizwa ngawe. Zama ukuthola ukuthi yiziphi izinkomba ezingalindela okuthile okusobala, ngoba uma ebheka eceleni zingaba yizinkomba zamahloni.
Kunabantu abangalokothi bathathe isinyathelo sokuqala noma ngubani besaba ukungamukelwa, futhi yingakho isimo sabo sengqondo, beziphatha ngokugwema lokho kubukeka. Kodwa-ke, uma emamatheka nawe, uzozinikela ngaso sonke isikhathi. Linda ukubona ukuthi ungasithatha yini leso sinyathelo esincane futhi uhlanganyele naye, kufanele ukhulume futhi yabelana ngaleyo chemistry yokuxhuma.
Izimpawu ezisobala zokuthi uyakuthanda kulapho ezama ukukucasula ngamehlo akhe, akubheke futhi abheke kude kaninginingi, kungenxa yokuthi ufuna ukukhuluma nawe. Futhi uma wenza ukunyakaza okunamahloni kanye nehaba Okwenzelwe ukunakwa nguwe, noma ejabula futhi evayizisa izingalo zakhe ukukhombisa ukuthi uyazijabulisa. Bona ukuthi uhleka kakhulu futhi kakhulu Njengoba kuyizimpawu zokufuna ukuheha intshisekelo yakho, mhlawumbe ukumema ukuthi ubambe iqhaza engxoxweni yakhe futhi ufuna ukusondela enkampanini yakho.
Ukubukeka yilokho okuthinta okunamahloni nokuphazamisayo, yindlela esingaxhumana ngayo nomphakathi. Kuyisenzo sokuxhumana nobutha sibheke kwabanye abantu futhi singaxhumana ngamehlo ngengxenyana yomzuzwana ngisho nemizuzu. Ezimweni eziningi, ukubuka kuyindlela yokuqala yezindlela zokuxhumanisa.
Ekuphetheni, uma leyo ntombazane ikubuka bese ibheka eceleni, kungenxa yokuthi ikunikeza izimpawu zentshisekelo. Kepha uma imihlangano iba njalo futhi ezinsukwini ezilandelayo akasakubheki, mhlawumbe ngempazamo udidise amasignali. Eziningi zalezi zikhathi leyo ntombazane izimisele ukukuvumela uqaphele lokho ekwenzayo nokuthi unesibindi noma ungumnumzane omkhulu ungaqhamuka uzethule kamnandi.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Izithandani Nezocansi » Uyangibuka bese ebheka eceleni ngokushesha
Yimiphi imibala ethopha kakhulu lapho ugqoka owesilisa